KII UGU WEYNaa: Saynisyahannadii Dhulgariirkii 'MegaEarthquake' oo saadaaliyay California | Saadaasha Shabakadda
KII UGU WEYNaa: Saynisyahannadii Dhul gariirkii weynaa ee Mega waxay saadaaliyeen California
Casudi casals | | Saadaalin
San Andreas Fault, Kaliforniya
"Mid Weyn", waa magaca taasi waxaa loo isticmaalaa si aan rasmi ahayn inta udhaxeysa wadahadalka dadweynaha California, Oregon iyo Washington. Sidoo kale wuxuu ka yimid gobolka Canadian ee British Columba. Mid Weyn waxay ula jeedaan dhulgariirkii taas la filayo inuu ka dhaco aagga hoos yimaada Cascadia. Waa cilad badda gujis ah oo dhererkeedu yahay 1100km. Isbarbar yaac, iyo markan California, sidoo kale waxaa jira qaladka weyn ee San Andrés ee 1300km. Tani waxay mareysaa Gobolka Kalifoorniya ee Mareykanka iyo Baja California ee Mexico.
Seynisyahannadu waxay filayaan oo rajeynayaan in maalin kasta dhici karto. Wargeysyada qaar sanadihii la soo dhaafay waxaa hareeyay warar ku saabsan dhulgariirka soo socda. Runtu waxay tahay inaan si dhab ah loo go'aamin karin goorta ay dhici karto, laakiin isku raacsanaanta inay dhici doonto waa ku dhowaad gebi ahaanba. Waxaa la rajeynayaa inaad ka imaan karto labada dhinacba. Cawaaqibta waxay noqon doontaa musiibo.
1 Intee ayuu la egyahay "Big One" MegaEarthquake?
2 Miisaanka 'Richter'
3 Dhawaan Weyn oo cabsi leh
Intee ayuu la egyahay "Big One" MegaEarthquake?
Waxaa la filayaa baaxad u dhiganta ama ka weyn 8 miisaanka 'Richter scale'. Si loo fahmo baaxadda dhulgariirka, waxaan jiidi karnaa maktabad yar oo wargeys ah, oo aan u fiirsanno dhulgariirrada ka dhacay baaxadaas aadka u sarreeya. Waa inaan dhowr tusaale, midkood waa kii Japan ku dhacay 2011. Hoos-dhigga Xeebta Baasifigga ee hoos timaadda Okhotsk Plate wuxuu sababay tsunami baaxaddiisu dhan tahay 9,2 oo lagu aasay Richter, oo wata tsunami gaadhay xeebta. Waxay qaadatay 6 daqiiqo, waxay lahayd qoto dheer 29km, cilad dillaac ah oo dhererkeedu gaarayo 500km iyo balac dhan 200km iyo barakac toosan oo 20 mitir ah. Markii dambe waxaa ku xigay dhulgariir ka dhacay Japan oo cabirkiisu ahaa 8,1.
Iyadoo la tixgelinayo cabirka qaladka San Andrés ama aag hoosaadka Cascadia, way fududahay in la ogaado in cabirka dhulgariir weyn sida kan saynisyahano ay sharraxeen uusan aheyn mid fog. Marka loo eego xisaabinta la sameeyay, aagga Cascadia, waxay soo saari doontaa tsunami 12-saac ah taas ayaa imaan lahayd oo tagi lahayd. Waxay qaadi doontaa cuf 2 jeer ka badan kii dhaqaaqay Tsunami-kii Chile ee 2010. Cabirkiisu wuxuu u dhexeeyay 8,8 iyo 9,0.
Dhulgariirkii San Francisco ee sanadkii 1906. Weyntii u dhaxeysay 7,9 iyo 8,6
Saamaynta caadiga ah ee aan ku heli karno hadba inta ay le'eg tahay waa kuwa hoos lagu sharaxay. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim in la tixgeliyo dhinacyada qaarkood. Saamaynta ay ku yeelan doonaan dhulka kuma xirnaan doonaan oo keliya baaxadda, laakiin sidoo kale fogaanta xudunta xudunta, qoto dheer, meesha diirada la saarayo iyo xaaladaha dhulka. Qaarkood way xoojin karaan awoodda dhulgariirka.
Baaxadda 2,0 ama ka yar: Micro. Saameynteeda waa lama taabtaan. Waxaa jira qiyaastii 80.000 maalintii.
Baaxadda 2,0 ilaa 2,9: Ka yar. Guud ahaan lama dareemi karo. Waxaa jira qiyaastii 1.000 maalin kasta.
Baaxadda 3,0 ilaa 3,9: Ka yar. Badanaa waa la ogaan karaa, laakiin badanaa waxyeello ma leh. Waxaa jira qiyaastii 49.000 sanadkii.
Baaxadda 4,0 ilaa 4,9: Iftiin. Dhaqaaqa buuqa iyo dhaqdhaqaaqa shayga, laakiin leh dhaawac yar. Qiyaastii 6.200 sanadkii.
Baaxadda 5 ilaa 5,9: Dhexdhexaad Dhulgariirkan noocan ah wuxuu sababi karaa waxyeello soo gaadha dhismayaasha daciifka ah iyo dhismayaasha aan si wanaagsan loo dhisin. Waxaa jira qiyaastii 800 sanadkii.
Baaxadda 6 ilaa 6,9: Xoog leh Waxay burburin kartaa aagagga ay ku badan yihiin xitaa ilaa 160 mayl agagaarka. Kuwaas waxaa jira qiyaastii 120 sanadkiiba.
Baaxadda 7 ilaa 7,9: Ka sareeya. Khasaaraha ay geysan karaan waa mid aad u daran meelaha ballaaran. Qiyaastii 18 ayaa la soo saaraa sanadkiiba.
Baaxadda 8 ilaa 8,9: Weyn Halkan waxaan horeyba uga hadalnay Mega Terremos ama Mega Seísmos. Aagagga waxyeeladu waa dhowr boqol oo km. Mararka qaarkood waxaa jira 1 ilaa 3 sanadkii.
Baaxadda 9 ilaa 9,9: Weyn Burbur ku yimid aagag dhowr kun oo km ah. Soo noqnoqodkeedu waa 1 ama 2 20kii sanaba mar.
Weynaanta 10: Qiyaasta. Weligeed laguma qorin taariikhdeenna mana jiraan diiwaanno.
Dhawaan Weyn oo cabsi leh
Toddobaad ka hor dhulgariir ka dhacay koonfurta Mareykanka wuxuu dhaliyay cabsi Kan weyn. Waxaa jiray netizens oo xitaa sheegay inay sababi karto qarxa fulkaanaha Yellowstone. Masuuliyiintu waxay diiwaangeliyeen 11.000 warbixinno oo ku saabsan dadka ay dhibaatadu saameysey. Xarunta xudunta dhulgariirka weyn ee 5, oo leh dhowr ruxitaano 4, waxay ka dhacday 9km koonfur-bari Lincoln.
Ogaanshaha aagga fulkaanaha iyo dhulgariirka u nugul ee Kaliforniya, joogitaanka cirfiidka baqdinta weyn ee 'Big One', anomaly kasta wuxuu soo jeedinayaa inay isla markiiba dhici karto. Waxa kaliya ee laga dhihi karo waa inay dhacdo. Ogaanshaha goorma ayaa ah wax qof kasta maskaxdiisa ku jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » KII UGU WEYNaa: Saynisyahannadii Dhul gariirkii weynaa ee Mega waxay saadaaliyeen California
Haysashada carruur yar, oo ka mid ah tallaabooyinka ugu wax ku oolka badan ee lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada
Dhismaha weyn ee loo yaqaan 'Larsen C shelf shelf' ee Antarctica ayaa jaba